Beesha caalamka oo si wadajir ah usoo dhawaysay ansixinta Golaha wasiirada cusub – Idil News
Beesha caalamka oo si wadajir ah usoo dhawaysay ansixinta Golaha wasiirada cusub
Beesha Caalamka ayaa waxa ay ka hadashay Go’aankii 29-kii Bishan xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ay ku ansixiyeen Golaha Wasiirada cusub ee Soomaaliya, oo uu soo magacaabay Ra’iisul Wasaare Khayre.
Saaxiibada daneeya arrimaha Soomaaliya oo ay ka mid yihiin QM, Midowga Afrika, Midowga Yurub, IGAD, Talyaaniga, Belgium, Netherlands, Sweden ayaa si wadajir ah waxa ay u soo dhaweeyeen ansixinta Golaha Wasiirada cusub ee Soomaaliya.
“Go’aanka xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ay shalay ku ansixiyeen Golaha Wasiirada cusub waxa ay aheyd mid kalsooni siineysa Dowladda iyo shacabka, sidoo kale waxa ay tahay talaabo horey loo qaaday, oo la doonayo in la sii dar dar geliyo.” Ayaa lagu yiri warka Qoraalka ah ee ka soo baxay Beesha Caalamka.
Sidoo kale Beesha Caalamka ayaa waxa ay sheegtay Dowladda cusub ee Soomaaliya gaar ahaan xukuumadda in looga fadhiyo in ay wax ka qabato arrimo badan, kuwaasi oo ay ka mid yihiin Macluusha Abaaraha ee dalka ka jira iyo arrimaha Amniga.
Ugu dambeyntii Saaxiibada daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa u rajeeyay Wasiirada cusub ee Soomaaliya in ay ku guuleystaan waajibaadkooda Qaran, waxaana ay u balan qaadeen in ay garab taagan yihiin, si shaqadooda ay ugu guuleystaan.